ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရှင်များ၊ နှီးနွယ်ဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု ရသော ရောဂါ (၁၇) မျိုး (DUNS)၊ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော ကူးစက်ရောဂါများ (Emerging Disease)၊ ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ်၍ရသောရောဂါများ (VPDs) နှင့် တိရစ္ဆာန်မှတစ်ဆင့် ကူးစက် စေတတ်သောရောဂါများ (Zoonosis) နှင့်ပတ်သက်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့်အညွှန်းကိန်း များပေါ် အခြေခံသော အပတ်စဉ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင် သော ရောဂါများ၏အန္တရာယ်ကို စောလျင်စွာသိရှိခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ Regional Surveillance Officer (RSO) Network ကို ပိုလီယိုရောဂါကင်းစင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (၁၉၉၉) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပိုလီယိုရောဂါ၊ ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ် နိုင်သော ရောဂါများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု၍ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အပြင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေ အနေများ (Public Health Emergencies) နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များတွင်လည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ RSO Network နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရလဒ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်း ပိုလီယိုကင်းစင်သောနိုင်ငံအဖြစ် (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ကြေညာနိုင်ခဲ့ပြီး (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင် ဝက်သက် ရောဂါကင်းစင်ရေးအတွက်လည်း အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစည်းမျည်း များ (IHR)နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကဆောင်ရွက်နေပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ် နိုင်ရန်နှင့် စောလျင်စွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင် ရည်ကို စစ်ဆေးခြင်းအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ပူးတွဲပြင်ပ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း (JEE) ကို (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးတွဲပြင်ပ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၏ တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ကာကွယ်စောင့်ကြည့် တုံ့ပြန်ရေး အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကိုရေးဆွဲနိုင် ခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ကူးစက်ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဆေးရုံမှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်နိုင်စေရန် မဟာ မဲခေါင်ဒေသခွဲကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက် (GMS-HS) (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ကိုလည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအနေဖြင့်လည်း ကူးစက်ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော “ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ” ကို ရေးဆွဲလျက်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြီးပါက အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသား အဆင့် တစ်ပေါင်းတည်းသော ကျန်းမာရေးချည်းကပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်း (2018-2022) ကိုလည်း (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲသည် (၂၀၃၀) ခုနှစ် တွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကင်းစင်ရေး ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ခွေးများအစုလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သူ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ထို့ပြင် အမျိုးသားအသည်းရောင်အသားဝါရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်သည်လည်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ၍ (၂၀၃၀) ခုနှစ်တွင် အသည်းရောင်ရောဂါ လူနာများလျော့နည်းပပျောက်သွားရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကူးစက်ရောဂါနှိမ်နင်းရေး စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ (၉) လသင်တန်း (FETP) ကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အလားတူသင်တန်းများ၊ ကပ်ရောဂါစုံစမ်း ထောက်လှမ်းခြင်းသင်တန်းများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရေးအတွက် အရေးပါသော မြန်မာနိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန (Myanmar CDC) နှင့် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
Disease Surveillance, Response and IHR Implementation
Central Epidemiology Unit (CEU) is the National Focal Point (NFP) for the communicable disease surveillance and response in collaboration with health professionals and related departments and organizations. National Surveillance System mainly focuses on epidemic prone communicable diseases, Diseases Under National Surveillance (DUNS), emerging infectious diseases, Vaccine Preventable Diseases (VPDs) and zoonosis. Through the event-based and indicator-based weekly-integrated surveillance system, early warning, alert and response to communicable diseases are achieved. Surveillance data are shared with the relevant stakeholders through monthly epidemiology bulletin. The Regional Surveillance Officer (RSO) Network has been established since 1999 with the primary aim of achieving polio eradication goal. RSO network actively participates not only in surveillance and response for polio and VPDs but also for immunization activities, public health emergencies, and natural and man-made disasters. It was certified the South East Asia Regional Polio Eradication in 2014 with the coordinated efforts of health staff at all levels together with the RSO Network. Again, efforts have been putting for achieving measles elimination goal in 2020.
Asafocal unit for implementing for International Health Regulations (IHR), CEU works together with the related stakeholders to build up the core capacities for IHR implementation including Port Health. The Joint External Evaluation (JEE) of IHR Core Capacities was successfully carried out in 2017 to assess country capacity to prevent, detect, and rapidly respond to public health threats. Based on the findings of the JEE, National Action Plan for Health Security (2018-2022) and costing plan is finalized in 2018 and is being implemented. Greater Mekong Sub-region Health Security Project (2017- 2021) is also implemented for enhancing regional cooperation for regional communicable disease control, national communicable disease surveillance and outbreak response and improving laboratory services and hospital infection prevention and control. Enhancing the legal capacity, the Communicable Diseases Law,alegal framework for communicable surveillance and response is being revised and finalized soon.
The Department of Public Health and the Livestock Breeding and Veterinary Department (LVBD) have jointly developed the National One Health Strategy (2018-2022) in 2017. Through One Health strategy, To achieve “Zero by 30” rabies elimination goal for ending human deaths from dog-mediated rabies by 2030, CEU disseminates health information, related to human rabies, collaborate with (LVBD) to provide pre-exposure prophylaxis to dog handlers of dog vaccination campaigns and post-exposure prophylaxis for the community. In addition, the National Hepatitis Control Program is trying to achieve the global hepatitis elimination goal in 2030 throughacomprehensive approach. The program provides public sector hepatitis C treatment for both HCV mono-infection and HCV-HIV co-infection in line with WHO strategic directions.
To strengthen the epidemiology capacity of health staff, CEU runs the Field Epidemiology Training Program. The first cohort of FETP Intermediate Course has been successfully carried out in 2018-2019. Further FETP courses and training on surveillance and outbreak investigation will be conducted. Under the stewardship of the MOHS, CEU, the nucleus of the future Myanmar CDC, will continue to work together with health staff at all levels for prevention and control of communicable diseases.